Trano - Countdown ho an'ilay Fanjakana
Ny hafatry ny lanitra ho an'ny fotoantsika
Aza manamavo ny tenin'ny mpaminany,
fa zahao toetra ny zavatra rehetra;
mifikira amin'izay tsara ...
(1 Tesalonianina 5: 20-21)
Fa maninona ity tranokala ity?
Tamin'ny fahafatesan'ny Apôstôly farany dia nifarana ny fanambarana ampahibemaso. Izay rehetra ilaina amin'ny famonjena dia efa nambarany. Na izany aza, tsy nitsahatra niresaka tamin'ny zavatra noforoniny Andriamanitra. The Katesizin'ny Fiangonana Katôlika milaza fa "na dia ny Apokalipsy aza dia efa vita tanteraka nefa tsy voazava mazava tsara; mitoetra ho amin'ny finoana kristiana tsikelikely hahitana ny lanjany lehibe mandritra ny taonjato maro ”(n. 66). Ny faminaniana dia feon'Andriamanitra mandrakizay, mitohy miteny amin'ny alàlan'ny irak'Andriamanitra izay antsoin'ny Testamenta Vaovao hoe "mpaminany" (1 Kor 12:28). Misy zavatra lazain'Andriamanitra ve tsy mahasoa? Tsy mieritreritra izany koa izahay, ka izany no antony namoronanay ity tranokala ity: toerana hahafahan'ny Tenan'i Kristy hahafantatra ireo feon'ny faminaniana azo itokisana. Mino izahay fa mila ny fanomezana ny Fanahy Masina io Fiangonana io fa fahazavana ao amin'ny haizina — rehefa manisa ny fahatongavan'ny Fanjakan'i Kristy isika.
Disclaimer | Fampiharana momba ny fanambarana tsy miankina | Fandikana ny fandikana
Maninona no fanahy tsy azo inoana?
Fa maninona i Eduardo Ferreira?
Fa maninona no Alicja Lenczewska?
Fa maninona i Dada Stefano Gobbi?
Fa maninona i Elizabeth Kindelmann?
Fa maninona i Jennifer?
Fa maninona i Martin Gavenda?
Fa maninona no Valeria Copponi?
The Tolls (nohavaozina tamin'ny 3 Desambra 2021)
Desambra 3, 2021
Ny fahafatesan'izao tontolo izao dia mety ho an-tapitrisany - mangina ny haino aman-jery.
Soratra Masina - Rehefa tapitra ny fanjakazakana
... hanjaka ny fandriampahalemana sy ny rariny.
Valeria - Amin'izao andro farany izao
...Hanakaiky anao kokoa aho.
Jereo ny hafatra rehetra »
Fanampiana amin'ny fifandraisana izay ilaintsika rehetra! Fizarana 2 miaraka amin'i Christine Bacon, ilay "dokotera fifandraisana."
Torohevitra momba ny fifandraisana tsy maintsy fantarina izay afaka manao fahagagana - Fizarana 1. Ianaro ny dikan'ny hoe MASINA.
Mistery Mamirapiratra (zarao amin'ny zatovo!): NOVENA ROSARY 54 ANDRO NATIONAL miaraka amin'i Fr. Blount sy Christian
Hizaha ny horonan-tsary rehetra »
Podcast farany teo
Ny fanaintainan'ny asa
Fampitandremana, famerenana ary ilay Fahagagana
Ireo vavahady masina
Ny fitondran'ny Antikristy
Maro ny mystika no niresaka momba ny fotoan'ny fahoriana lehibe izay ho tonga eto ambonin'ny tany. Maro no nampitaha azy io tamin'ny tafio-drivotra toy ny rivo-doza.
Vakio manontolo ny Timeline
Nisy fisehoan-javatra lehibe "taloha" sy "taorian" teo amin'ny tantaran'ny Baiboly izay nanova ny fizotry ny fiainan'ny olombelona teto an-tany. Androany, fanovana lehibe iray hafa no mety hitranga amintsika ato ho ato, ary ny ankamaroan'ny olona dia tsy mahalala na inona na inona momba izany.
Mahafantatra ny Varavaran'ny famindrampo sy ny varavaran'ny fahamarinana mandritra ny mason'ny rivo-mahery ...
Ny Andron'ny Tompo dia tsy andro efatra amby roapolo andro fa araka ny filazan'ny Rain'ny Fiangonana,
fe-potoana iray izay hodiovina ny tany ary hiara-manjaka amin'i Kristy ireo olo-masina.
Vakio manontolo ny fandaharam-potoana
Hihena ny refin ny Fiangonana, ilaina ny hanomboka indray ...
Miaraka amin'ny Fampitandremana sy fahagagana izao ao ambadiky ny maha-olombelona, ​​ireo tsy mety mandalo ny "varavaran'ny famindrampo" dia tsy maintsy mandalo eo amin'ny "varavaran'ny fahamarinana".
Ny hadita Masina dia manamafy fa, amin'ny faran'ny vanim-potoana iray dia misy lehilahy iray izay nantsoin'i Md Paoly hoe "ilay mpandika lalàna" dia andrasana hitsangana ho Kristy sandoka eto amin'izao tontolo izao, ka manao ny tenany ho toy ny fiankohofana ...
Tokony ho marina isika: miteny ara-panahy sy ara-pitondrantena, izao tontolo izao dia ao anatin'ny toe-javatra ratsy kokoa noho ny niainany taloha.
Ity tontolo ity dia tsy ho ela dia hahita ny vanim-potoana volamena be voninahitra be indrindra izay hita hatramin'izay Paradisa mihitsy. Ny Fahatongavan'ny fanjakan'Andriamanitra, izay hahatanteraka ny sitrapony tety an-tany tahaka ny any an-danitra.
Mampianatra ny fiangonana fa Jesosy dia tena hiverina amin'ny voninahitra tokoa ary ity tontolo ity, araka ny fantatsika azy, dia hijanona amin'ny fitsangantsanganana. Saingy tsy hitranga izany alohan'ny ady mahery vaika, cosmic izay hanaovan'ny fahavalo ny safidiny farany hanjakan'ny ...
Indraindray ny hoe 'Fiaviana Fanindroana' dia fanondroana ny zava-mitranga tsy mitovy sy ny fahatongavan'i Kristy ara-batana, hita maso ary ara-bakiteny ao amin'ny nofo amin'ny faran'ny fotoana - Fampitandremana, fanombohana ny Era, sns ... ary indraindray ny 'Faharoa Ny Fiaviana dia fanondro ny Fitsarana farany sy Fitsanganana amin'ny maty Mandrakizay nanomboka tamin'ny fiaviany ara-batana tamin'ny faran'ny fotoana.
Fahasalamana, fanasitranana ary fiarovana ho an'ny vatana sy ny trano.
Vakio ny lahatsoratra »
Fomba sy fiarovana ara-panahy ho an'ny tenanao sy ny olon-tianao.
Raha sanatria manakatona anay i Big Tech ary te-hifandray ianao dia ampio ihany koa ny adiresinao izay tsy hozaraina mihitsy.
MTS, LCSW, mpandahateny katolika, mpanoratra be mpamidy, Tale Jeneraly ary mpanorina ny Queen of Peace Media.
Vakio feno ny bio »
Mpanoratra Katolika, bilaogera, mpandahateny ary mpanoratra / mpanoratra.
Ny famolavolana tranonkala nataon'i tiDesign © 2021
Ny tsy fitoviana be loatra ataon'ireo mpandinika katolika maro hidirana amin'ny fanadinadinana lalina ireo singa apokaliptika amin'ny fiainana ankehitriny, dia mino aho fa ampahany amin'ireo olana izay tadiaviny hialana. Raha ny eritreritra apokalipsy dia navela ho an'ireo olona nilefitra na nianjera tamin'ny horohoron-tany mampihorohoro, dia ny vondrom-piarahamonina Kristiana tokoa, ny vondron'olona iray manontolo. Ary azo refesina io raha ny amin'ny fanahy very. –Author, Michael D. O'Brien, Miaina ao anatin'ny vanim-potoana apokaliptika ve isika?
Miangavy amin-katsaram-panahy izahay fa, rehefa mamaky ny atin'ny tranokala ity, ny mpamaky rehetra dia ataovy lohalaharana hatrany ao an-tsainy ireto fampitandremana enina manaraka ireto:
1. Tsy isika no mpitaona farany amin'ny maha-fanambarana marina - ny Fiangonana - ary hanaiky hatrany izay rehetra horaisiny isika. Izany dia amin'ny ny Fiangonana, avy eo, izay "andramantsika" faminaniana: "Notarihin'ny Magisterium an'ny Fiangonana, the sensus fidelium mahay mamantatra sy mandray amin'ireto fanambarana ireto na inona na inona mety ho fiantsoana marina an'i Kristy na ireo olomasiny ao am-piangonana. ” (Katesizan'ny Fiangonana Katolika, n. 67)
2. Izahay dia manaiky ary manaja lalina ny maha samy hafa ny tsy fitovian'ny fanambarana ho an'ny Public sy ny tsy miankina, ary tsy manolotra an'iza an'ity farany izahay hitaky ny mitovy amin'ny mpino avy amin'ny mpino.
3. Misokatra hatrany izahay amin'ny fandinihana ireo fivoarana hafa mifandraika amin'ny fahitana ireo fanambarana nampidirinay, ary noho izany dia tsy mitaky fahatokisana tanteraka amin'ny fanambarana tsirairay amin'ity tranonkala ity, na dia nanapa-kevitra izahay fa ny tsirairay dia mendrika hampidirina eto ary ilaina ny fanaparitahana. Voafetra hatrany ny haben'ny atin'ny tranokala ary tsy misy tokony horesahina amin'ny tsy fisian'ny mpahita iray nomena ny pejiny.
4. Na dia ataontsika tena zava-dehibe tokoa aza ny fanambarana tsirairay avy, raha toa ka azo itokisana amin'ny alàlan'ny fitsipika napetraky ny Fiangonana ho an'ny mahay manavaka (mamaky bebe kokoa kitiho eto), izahay amin'ny farany miezaka mba haka avy amin'ny fahasamihafan'ny fanambarana ny "marimaritra iraisana ara-paminaniana" izay tsy miakatra na tsy hianjera amin'ny maha-zava-miafina iray na roa, fa kosa tena antsoin'ny Fanahy ho an'ny fiangonana ankehitriny.
5. Heverinay fa na ny fanambarana manokana azo itokisana aza dia tsy maintsy raisina araky ny fampianaran'ny Fiangonana. Eto isika dia mandray ny fahendren'i St. Hannibal: "Manaraka ny fahamalinana sy ny fahitsiana masina, ny olona dia tsy afaka miatrika ny fanambarana manokana toy ny hoe boky kanonika na didin'ny Holy See…" (ao amin'ny taratasy iray ho an'ny P. Peter Bergamaschi)
6. Ny mpahita dia fitaovana azo zahana, ary toy izany, “… izay rehetra ambaran'Andriamanitra dia raisina amin'ny alalàn'ny toetran'ilay lohahevitra sy. Amin'ny tantaran'ny fanambarana ara-paminaniana dia tsy fahita matetika fa ny toetran'ny olombelona voafetra sy tsy lavorary dia voakasiky ny fisehoan-javatra ara-tsaina, ara-pitondrantena na ara-panahy izay mety hanakana ny fahazavana ara-panahy an'ny fanambaran'Andriamanitra tsy hamirapiratra amin'ny fanahin'ny mpaminany, izay ahitan'ny mpaminany ny novaina an-tsitrapo ny fanambarana. ” (Newsletter, Misionera ny Trinite Masina, Janoary-Mey 2014). Noho izany, ity tranokala ity dia tsy fanamarinana izay rehetra nolazain'ny mpahita na nosoratany. Isika ihany no mandinika izay avoaka Eto miorina amin'ny fepetra voalaza etsy ambony.
Amin'ny vanim-potoana rehetra, ny Fiangonana dia nahazo ny maha-sarin'ny faminaniana, izay tsy maintsy hodianana fa tsy fanamavoana. —Cardinal Ratzinger (BENEDICT XVI), Hafatr'i Fatima, Commentaire teolojia, www.vatican.va
Mamporisika anao izahay hihaino amin'ny fo tsotra sy fahatsoram-po amin'ny fampitandremana feno fanaon'ny Renin'Andriamanitra… Ny Romanina Pontiff ... Raha miorina amin'izy ireo ny mpiambina sy mpandika ny Fanambarana masina, izay hita ao amin'ny Soratra Masina sy ny hadita, dia raisin'izy ireo koa izany. amin'ny maha adidiny azy ireo ny manolotra ny sain'ny mpino - rehefa avy nandinika izany izy ireo dia mitsara azy ireo ho amin'ny tombotsoan'ny besinimaro - ireo jiro mihoatra ny natoraly izay sitrak'Andriamanitra hanome maimaimpoana amin'ireo fanahy manana tombontsoa sasany, tsy amin'ny fanolorana fotopampianarana vaovao, fa tariho amin'ny fitondran-tenanay izahay. —SAINT POPE JOHN XXIII, Hafatry ny Radio Papalà, 18 Febroary 1959; L'Osservatore Romano
Izy ireo izay anaovana fanambarana iray, ary iza no azo antoka fa avy amin'Andriamanitra, no manome antoka azy io? Ny valiny dia ao anatin'ny fanamafisana… Izay natolotra sy hanambarana izany fanambarana izany manokana dia tokony hino sy hankato ny didy na hafatr'Andriamanitra, raha omena azy amin'ny porofo ampy izy… Fa Andriamanitra dia miteny aminy, farafaharatsiny amin'ny alalany ny iray hafa, ary noho izany dia mitaky azy hino; noho izany, izy dia tsy maintsy mino an'Andriamanitra, Izay mitaky azy hanao izany. — PAPA BENEDICT XIV, Mahery fo maherifo, Boky III, p.390
Ireo izay latsaka an'izao tontolo izao dia mijery etsy ambony sy avy any ambony, mandà ny faminaniana momba ny rahalahiny sy anabaviny izy ireo… -POPE Francis, Evangelii Gaudium, n. 97
Fampiharana momba ny fanambarana tsy miankina
Countdown to the Kingdom dia tranonkala iray, mankatoa ny fanapahan-kevitra farany horaisin'ny Fiangonana, izay mamoaka ilay antsoina hoe "fanambarana manokana" - hafatra manintona nalefa avy tany an-danitra mba hanampy antsika hiaina feno kokoa amin'ny fanambarana masina amin'ny ora voatondro eto an-tany. Ny fanambarana "manokana" dia matetika Andriamanitra no milaza fa tokony hiparitaka sy eken'ny rehetra. Raha lazaina amin'ny teny hafa, dia saika tsy natao ho “manokana” izany. Amin'ny alàlan'ny fanambarana "manokana" dia ananantsika ny Rosary nomen'i Our Lady an'i St. Dominic; ny fanoloran-tena amin'ny Sabotsy Voalohany sy ny fampitandremana ny Ady Lehibe Faharoa avy amin'ny Our Lady of Fatima. Manana ny fampitandremana momba ny mosary amin'ny alàlan'ny Our Lady of La Salette isika, raha toa ka manohy manafintohina an'Andriamanitra ny olona, ​​ary koa ny fanirian'i Kristy ny Alahady Famindram-po masina sy ny Chaplette Mercy masina amin'ny alàlan'ny fanambarana nataony tamin'i St. Faustian Kowalska - mba hitonona vitsivitsy fotsiny. Ny tsy firaharahiantsika ny fanambarana manokana ataontsika nefa tsy misy fiheverana azy dia mety hitera-doza lehibe amin'ny tsy firaharahiantsika ny Tompo Tenany.
Ny teny hoe "manokana" dia naseho tamina fanambarana ara-paminaniana avy any an-danitra mba hampifanohitra azy amin'ny fanambarana ampahibemaso Depositum Fidei (Deposit of Faith): ny soratra masina sy ny lovantsofina dia nadika tamim-pahalalana nandritra ny taona maro avy amin'ny magisterium. Amin'ity fanambarana ampahibemaso ity dia manana fototra azo antoka isika - vatofehizanana mafy izay ahafahantsika mijoro tsara hatrany, na inona na inona mety hitranga, ary fiambenana tsy azo resena miaro antsika amin'ny hantsana mampidi-doza. Ny atin'ny fanambarana ampahibemaso, irery, manerantany dia mitaky ny faneken'ny finoana masina (toy ny hatsaram-panahy mihoatra ny natiora) amin'ny fanahy rehetra, ary tsy misy fanambarana manokana afaka manampy ny ao anatiny. Eny tokoa, izay rehetra ao anatin'ity fanambarana ampahibemaso ity dia tanteraka sasany; na inona na inona mifanohitra io tanteraka diso, ary tsy hisy fanambarana ampahibemaso vaovao mandra-pahatapitry ny fotoana.
Aza hadino na oviana na oviana izany.
Fa aza mody hevitra hoe vitao ankehitriny! Ny katesizy an'ny Eglizy katolika dia nilaza hoe:
“Tsy andraikitra [antsoina hoe 'fanambarana' manokana '' hanatsarana na hamenoana ny fanambarana voafaritr'i Kristy, fa ny hanampy azy ireo hiaina bebe kokoa amin'izany ao anatin'ny vanim-potoana iray amin'ny tantara. Notarihin'ny magisterium an'ny Fiangonana, ny fanisam-bahoaka mahay manavaka sy mandray ao amin'ireo fanambarana ireo na inona na inona fiantsoana marina an'i Kristy na ireo olomasiny ao amin'ny Fiangonana. . . " (§ 67)
Ny Katesizy koa dia milaza:
"Amin'ny zavatra rehetra lazainy sy ataony, ny olona dia voatery manaraka amim-pahatokiana izay fantany fa marina sy mahitsy." (§1778)
Ny katesizy ao amin'ny fiangonana katolika dia manao izany tsy miteny hoe: "Ny olombelona dia tsy maintsy manaraka an-tsakany sy an-davany ireo karazana fahamarinana manokana naparitaka tamina fanambarana napetraky ny fanambarana ampahibemaso." Saingy ity fanodikodinana an-kolaka momba ny fampianarana ao am-piangonana ity dia mampalahelo fa izany indrindra no maheno olona maro ao amin'ny faribolana katolika ankehitriny isaky ny mizara ireo hafatra maika avy any an-danitra: “Oh, fanambarana manokana izany? Pshh! Na izany aza dia hamaly aho fa toa te-hamaly, avy eo; misaotra betsaka ary dia mirary tontolo andro tsara ho anao! ”
Ity hetsi-panoherana ity dia saika midika hoe ny adidintsika be voninahitra amin'ny maha-zanak'Andriamanitra ny fanarahana ny feon'ny fieritreretantsika sy ny fihainoana ny feon'ny Fanahy foana, izay ahitana ny torolalana mitohy, fitahiana, fampitandremana ary fananarana avy any an-danitra. Hatramin'ny oviana ny fahamarinana sasany no tsy mazava sy voafaritra mazava amin'ny fetran'ny fametrahana ny finoana toa tsy misy dikany izany? Hatramin'ny oviana izany no miaro ny katolika iray mba tsy ho vitantsika ny handray andraikitra, eny fa na dia maika aza no ilaina?
Raha tsy handroso amin-kerim-po sy amin-kerim-po isika amin'ny zavatra nanjary resy lahatra ny saintsika sy ny fontsika amin'ny alàlan'ny aingam-panahy avy any an-danitra, dia tsy olombelona tena izy akory isika; azo antoka fa tsy afaka ny ho Katolika tena izy isika raha tsy olombelona marina. Raha atao teny iray, ny fanambarana ampahibemaso dia tsy fanasana hampihena ny firoboroboan'ny olombelona sy ny fahalalahantsika; izy io dia mamporisika azy roa.
Noho izany, ry havana malala, miorena amin'ny fahatokisana an'ity fototra tsy mety resy ananantsika ity amin'ny fanambarana ampahibemaso: voarakitra ao amin'ny Soratra Masina, nitombo tamin'ny hadita masina, ary nohazavaina tamin'ny fomba mazava tamin'ny magisterium. Aza sahy na oviana na oviana, amin'ny eritreritra, teny na fihetsika — amin'ny alàlan'ny komisiona na amin'ny alàlan'ny fanesorana - manohitra ireo fototra ireo (na dia heverinao fa fanambarana manokana aza no nangataka anao hanao izany). Aza avela hisakana anao tsy hiakatra ambony kokoa anefa ny fototra.
Rehefa miteny ny lanitra dia zava-dehibe izany. Ary ny lanitra dia miantso antsika anio toy ny tsy mbola nisy teo amin'ny tantara. Misy zavatra ho avy. Zavatra tsy mbola hita teo amin'ny tantara. Zavatra izay mitaky ny tantara ho satroboninahiny. Miresaka aminao ny lanitra.
Raha mila fanazavana fanampiny, momba ny fanambarana ho an'ny daholobe sy tsy miankina, jereo ny p. 48-69 Ny satrobonin'ny fahamasinana sy p. 93-95 Ny Crown of History by Daniel O'Connor.
Jereo ihany koa ny manaraka nataon'i Mark Mallett, mpanoratra ny Ilay Teny Ankehitriny:
Faminaniana tsara raha tsy takatry ny saina
Azonao atao ve ny tsy miraharaha ny fanambarana manokana?
Maninona no an'izao tontolo izao dia miaritra fanaintainana
Avadiho ireo lohany
Amin'ny fanambarana tsy miankina
Momba ireo mpahita sy fahitana
Raha mamaky pejy voadika amin'ny tranokala avy amin'ny anglisy tany am-boalohany ianao dia tadidio fa mety misy lesoka eo amin'ny fandikana.